Syria: Mpanao Sariitatra Notazonina noho ny Fitsikerana an’i Assad · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2017 15:53 GMT
(Fanamarihana: nivoaka tamin'ny oktobra 2012 ny lahatsoratra amin'ny teny anglisy)
Mananda lafo izay Syriana mpanao sariitatra mampiseho ny toetran'i Bashar Al-Assad. Tany alohaloha tany, tamin'ny 25 Aogositra 2011, notaritarihana sy nodarohan'olona misaron-tava miisa telo i Ali Ferzat, mpanao sariitatra malaza enimpolo taona, ary notapahin-dry zareo ny tanany.
“Avoahy i Akram Rslan.” Loharano: ArabCartoon
Akram Rslan indray Syriana iray hafa mpanao sariitatra miasa amin'ny gazety Fedaa [ar] velomin'ny fanjakana. Notazonina izy tamin'ny 2 Oktobra 2012, rehefa namoaka sariitatra iray mitsikera ny filoha Syriana, araka ny notaterin'ny bilaogera The-Syrian blog [ar]:
Fotoana fotsiny no nandrasana hisamborana an'i [Rslan] raha mbola nanohy tamin'ny fitsikerana ny mpitondra sy ny fangejana ataony izy, nandeha lavitra loatra tamin'ny famelezana ny Filoha mihitsy. Tsy niafina i [Rslan] ary mbola nijanona tao an-tranony sy tany am-piasanany tao amin'ny gazety Fedaa miorina ao Hama. Tsy nahandry azy intsony ny fitondrana ka nisambotra azy tao amin'ny toeram-piasany tamin'ny alatsinainyy 2 Oktobra 2012. Nanomboka tamin'io fotoana io dia tsy nisy na inona na inona intsony fantatra momba azy.
Navoakan'ilay bilaogera ihany koa ny lalam-piainan'ilay mpanao sariitatra sy ny tsonga tamin'ny asany, ka tafiditra amin'izany ny iray izay heverina ho nahatonga ny fisamborana azy (jereo etsy ambany). Nandravaka ilay sariitatra ny teny tarigetran'ny mpanohana an'i Assad, ny “Shabiha,” izay ilazan-dry zareo fa aleo ny firenena no may toy izay hiala amin'ny fitondrana:
Nahazo diplaoma tamin'ny literatiora tamin'ny taona 1996 i Akram Rslan, teraka tamin'ny taona 1974 tao Soran-Hama. Iray amin'ireo mpikambana revolisionera maro nisafidy hitolona lavitry ny fampitam-baovao sy ny jiro fanazavana izy, ka vitsy ny fantatsika momba azy ireo mandra-pisamborana azy na mahalasa azy ho maritiora. Fahafahana ho an'ilay artista [Rslan] Akram. Indreto manaraka indreto ny fantina tamin'ny asan'i Rslan, ary tafiditra ao anatin'izany (voalohany) ilay sary niteraka ny fisamborana azy.
“Na Assad na may ny firenena” avy amin'i Akram Rslan.
Nomelohin'ny Doha Center for Media Freedom izao fitazonana ilay mpanao sariitatra izao, tamin'ny famoahana ity fanambarana manaraka ity:
Mandrisika ny manampahefana syriana ny foibe hanafaka tsy misy hatak'andro an'i Rslan sy hampitsahatra izao fanenjehana tsy mitsahatra ny mpanao gazety sy ny mpanohitra ny fitondran'i Assad izao. Tsy maintsy mampitombo ezaka ny governemanta hiarovana ny olon'ny fampitam-baovao sy hiantohana fa tsy ho tratran'ny tsindry, fanorisorenana ry zareo na tazonina noho ny antony mifandraika amin'ny asan-dry zareo.
Nanameloka izao fisamborana izao ihany koa ny ArabCartoon.
Nisy fanentanana anafahana an'i Akram Rslan ihany koa nivoaka tao amin'ny Youtube eo ambany tarigetra hoe : “Fahafahana ho an'i Akram Rslan”.